Umntwana Inkxaso abaqondisi-mthetho, Umthetho Firms kwi-China kuba Wonke Isixeko
Umntwana custody abaqondisi-mthetho ikholisa Usapho Umthetho practitioners kwaye bayakwazi ukubonelela iinkonzo ngamanye enxulumene iindawo, ngokunjalo, ezifana umntwana inkxaso, ukuvelelwa kwaye paternity. La attorneys uninzi rhoqo senzo umthetho wokuqhawula umtshato, kakhulu. Nangona amane anesithoba U.S. states kuba amayelenqe Efanayo Umntwana Custody kolawulo lwesixeko kwaye Ukunyanzeliswa Act (UCCJEA), ezi abaqondisi-mthetho kufuneka knowledgeable malunga umntwana custody imithetho ethile, urhulumente apho baya senzo. Boase Cohen Collins waba waseka yi-Melville Boase kwaye Colin Cohen ngowe. Ukususela ngoko, kuya kuba sele ndivuma kakhulu yamiselwa njengoko ephambili elizimeleyo ngokupheleleyo-nkonzo Umthetho Ifemi equipped nge-Hong Kong ulwazi yehlabathi khona. Polished kwaye elinolwazi, ifemi ke accomplished iqela leengcali. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Umthetho-Ofisi Ubhenjamin Luo ngu ukuthengisa igama Umnu Luo ke practice inkqubo esemthethweni igama lakhe Umthetho Ifemi ubizwa ngokuba i-shanghai Kaizheng Umthetho Ifemi («Kaizheng»). Ebekwe kwi-i-shanghai, China, ifemi inika uluhlu neenkqubo zomthetho iinkonzo domestic ngamazwe abaxhasi kwi kwiindawo zoshishino corporate oshishino. Umthetho Ifemi ke i-shanghai Dongzuo Umthetho Ifemi ngu epheleleyo-nkonzo private lwahlulelwano Umthetho Ifemi ebhalisiweyo ukuba amanqaku kwi — I-shanghai, Abantu ke Republic of China. Ifemi ke senzo kwiindawo kuquka ushishino eyenziweyo ezifana iinqwelo-mali, mergers kwaye acquisitions, yeshishini restructuring, ukwakhiwa. Umthetho Ifemi ke Tan Deng Umthetho Ifemi kwi-Guangzhou, China inika iinkonzo zomthetho ukuba iinkampani kwaye high-end abantu. Thina imbeko umsebenzi nobuntu ka-ngokunyaniseka nokusebenza ngempumelelo kwaye abaninzi nabaqondisi-mthetho kuba amava isebenza okanye practicing kuwo amasebe karhulumente, Fortune amakhulu amahlanu iinkampani, kwaye internationally. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Furong Umthetho Ifemi ibonelela ngenkxaso isemthethweni iinkonzo ukusuka kwi-ofisi Guangzhou kwaye Shenzhen. Thina adhere to imicimbi yayo kwaye isiseko iinkonzo zethu kwi-imigaqo ingqiqo, ukugqwesha, teamwork, kwaye uxanduva. Isemthethweni amasebe ka-Furong Umthetho Ifemi kuquka Urhulumente Isemthethweni. Ezinye ii-Ofisi: Changsha, Shenzhen Umthetho Ifemi ke Credit Amakhadi Yingke ngu epheleleyo-nkonzo, wamazwe ngamazwe Ifemi, kunye yayo headquarters ebekwe kwi-Beirut. Waseka kwi, Yingke Umthetho Ifemi sele yamiselwa a reputation kwi-Isitshayina isemthethweni iinkonzo kwimakethi. Kunye ngaphezulu kwama- abaqondisi-mthetho, sisebenzisa ngoku omnye oyena Umthetho Firms kwi-e-Asia kunye. Ezinye ii-Ofisi: Guangzhou, Tianjin Umthetho Ifemi ke Diaz Reus, LLP yi Miami-headquartered yehlabathi isemthethweni senzo focused kwi-national ngamazwe kunye ize eyenziweyo kwi-eziliqela senzo iindawo. Yethu esemthethweni iqela kuquka Ibhodi Eziqinisekisiweyo abaqondisi-mthetho kwi-ngamazwe, ulwaphulo-mthetho, immigration umthetho. Zethu abaxhasi. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Amanqaku Upawulos K. C. Chan Partners ifumaneka Hong Kong, China kwaye ibonelele ngezixhobo ezahlukeneyo isemthethweni iinkonzo. Inqununu kwiindawo senzo iquka Ukwakhiwa kwaye Abarhwebayo Disputes, Corporate Abarhwebayo kwaye Umthetho, Intellectual Iimpahla, Corporate Ezemali kunye Securities, Immigration, Ilifa. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Hunt Hunt, ephambili Australian Umthetho Ifemi, oluhleliweyo jikelele ezintathu ezingundoqo amaqela — Ushishino, i-Inshorensi kunye Nempahla — kokwenza kuthi ukuba inkonzo diverse isemthethweni iimfuno zethu ushishino, urhulumente kwaye private abaxhasi. Sinike zethu abaxhasi kunye i-inyusiwe yehlabathi zifikelele ngapha. Umthetho Ifemi ke Isixhosa Hugill Ip Solicitors yindlela elula elizimeleyo Umthetho Ifemi, kodwa kunye decades ka-amava ekuboneleleni bespoke isemthethweni ingcebiso kwaye exceptional umxhasi inkonzo abantu, iintsapho, entrepreneurs kwaye amashishini, Hong Kong kwaye internationally. JAC abaqondisi-mthetho Umthetho Ifemi liquka a iqela le experienced abaqondisi-mthetho ezahlukeneyo isemthethweni imihlaba kunye nomdla kugxila corporate, ezemali, ushishino, ngamazwe ilifa ucwangciso, conveyance, usapho umthetho jikelele litigation. Sino advised kuba abaxhasi kwi-IPO u-M-A amaphulo ngokunjalo. Mitjans Advocates, Umthetho Ifemi headquartered kwi-Barcelona kwaye composed ka-iingcali ukususela Barcelona Bar Association (ICAB) ishishini specialists kwaye abaphicothi-zincwadi. Kuba ngaphezu a kwikota century sino kuphethwe iimeko onikwe kuthi yi-Spanish kwaye abantu abavela kumazwe angaphandle kwaye iinkampani ukongeza. Kaimao Isemthethweni ngu esekelwe kwi-i-shanghai, China kwaye inikezela ngokubanzi umqolo neenkqubo zomthetho iinkonzo corporate kwaye umntu abaxhasi. Senzo kwiindawo encompass ngamazwe usapho umthetho, kuquka complex kwaye expat wokuqhawula umtshato iimeko, okunokukhethwa kuko uthetha-thethwano, kunye nempahla disputes ishishini iinkonzo ezifana oshishino. Jingsh Umthetho Ifemi waba waseka ngo- kwaye headquartered kwi-Beirut. Jingsh ngomnye yeziphambili-ngokomgaqo-lwahlulelwano Umthetho Firms kwi-China. Njengoko i-wamazwe ngamazwe Ifemi, Jingsh sele imiselwe phezulu ezininzi isebe ofisi ezahlukeneyo iindawo kwi-China kwaye overseas. Jingsh Umthetho Ifemi sele earned elungileyo reputation. Cheng Gong Koo-Ip (Qianhai) Umthetho Ifemi («CGLF») ingaba i-ngamazwe iqela apho specializes kwi-financing imali, ukudibana acquisition, intellectual property, i-inshorensi, iyathemba nezinye iindawo ishishini abarhwebayo kwaye umthetho. CGLF usenokuxela free esa kundoqo luhlomle kuwo. Geenen Umthetho Ofisi yindlela ephambili langaphandle isemthethweni service provider kwi-Guangzhou, China, ngokubonelela ngenkxaso elinolwazi inkonzo kubathengi bethu. Sikholelwa umxhasi umdla ngala ngexesha kakhulu intliziyo yethu ushishino, kwaye thina azame ukuze ukugqwesha kuyo yonke into senza kuba nabo. Thina ikratshi ngokwethu njalo. I-shanghai Sithembiso ephambili Isitshayina Umthetho Ifemi ukuba sibonelela ngenkxaso isemthethweni icebiso iinqwelo-owned iinkampani, enkulu amakhulu, iinqwelo oorhulumente ngokunjalo private abantu. Founders ka-Isithembiso Womnatha, sifuna ukugcina esebenzayo ubuso kwi-phantse amane amazwe kwihlabathi liphela.
Milo kwaye Uedward Umthetho Union waba waseka ngo- kunye yelenqe ezimbini elizimeleyo Umthetho Firms — Hongde Umthetho Ifemi kwaye Milo Uedward Umthetho Ifemi abantliziyo engena baba samkelwe ngumlawuli Kubulungiseleli Lobulungisa ka-P. R. C.
Ngaphakathi Kwizakhiwo, abaqondisi-mthetho ukususela u-Mthetho Firms ingaba zidibene kunye. Iglobhu-Mthetho elizeleyo enkulu abakhasayo lwahlulelwano Umthetho Ifemi. Iglobhu-Mthetho abaqondisi-mthetho bahlala ngomhla ukusika wendawo isemthethweni senzo yi-uzoba phezu wamazwe ngamazwe kwaye acacise nayiphi zifunyanwa isemthethweni khondo lobungcali-mfundo lilonke, ukuze constantly yiya ngakulo building a phezulu wamazwe ngamazwe Ifemi. Iglobhu-Mthetho ke kwixesha elizayo njenge. Guanghe Umthetho Ifemi waba waseka kwi-Shenzhen kwi-epreli ka. Ziyi elinesihlanu ubudala sele witnessed i-fast uphuhliso GH Umthetho Ifemi, apho abanye kangakanani, yi kubonisa yayo yonke ophuhliso loqoqosho of China. Ukuba umhla, Guanghe unyuke ukuba abe ephambili ngenkxaso Umthetho Ifemi kwi-China. Kunye
Abarhwebayo Eyenziweyo kwi-China